Face covering information in Oromo - King County
Qajeelfamni haguuggi fuula ammo ajaja dhaabbata fayyaa isteeta waashington hordofa
Nama talaallii gutumaam guutuutti hin fudhanneef kam iyyuu, Qajeelffamni Kutaa Fayyaa Steetaa (Ingiliffaan) akkasumas hojii irra ni oola: Namoonni gutumaan guutuutti talaallii hin fudhanne “teessoo manneewwan ummataa kamiyyuu keessatti ykn manaan alatti fi yeroo namoota kaan irraa ijjannoo ja’a fagaachuudhaan fageenya hawaasummaa eeguu bakka hin dandeenyetti haguuggii fuulaa koowwachuutu isaan barbaachisa.”
Akkasumas namni hundinuu haguuggii fuulaa sirrii ta’e bakkeewwan armaan gadii keessatti dirqamaan koowwachuu qaba:
Da'oo namoota mana hinqabnee;
Manneen barnootaa fi teessoowwan oolmaa daa'immanii;
Geejiba uummataa, fi;
Teessoo eegumsa fayyaa kan akka waajjira doktoraa, bakkee kunuunsa yeroo dheeraa, fi hospitaalota.
Wiirtuun To'annaa fi Ittisa dhibee U.S (CDC) dhiyeenyatti namoonni guutumaan guututti talaallii fudhatan bakkeewwan adda addaatti akka haguuggii fuulaa hin koowwanne eeyyamuudhaaf qajeelfama isaa fooyyessee jira. Daayreektarri CDC Rochelle Walensky fi Kutaan Fayyaa Steeta Waashingtan itti fufiinsaan mana keessatti haguuggiin fuulaa akka hafu taasisuun saffisa COVID-19 naannoo fi saffisa uffusa (coverage) talaallii wajjin kan walqabatee jiru ta'uu isaa ibsanii jiru.
Kiing Kaawuntii keessatti maaltu gaggeeffamaa akka jiru ilaalchisee gaafii yoo qabaattan, maaloo wiirtuu COVID-19 Kiing Kaawuntiif ganama sa'a 8:00 hanga galgala sa'a 7:00tti Wiixata duraa irraa hanga Jimaataatti lakkoobsa 206-477-3977 bilbilaa.Gargaarsi afaanii ni jira.